‘कलिजुगमा केको तपस्या ?’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
‘कलिजुगमा केको तपस्या ?’
आमाले भन्नुभयो, ‘छोरीमान्छेले तपस्या गर्दैनन् कान्छी ! गरे पनि आफ्नै पति र सन्तानका लागि गर्छन् । तपस्या त देउताको पालाको कुरो, सत्यजुगको !’
कार्तिक १३, २०७८ सम्झना वाग्ले भट्टराई
सानो छँदा गाउँमा मनोरञ्जनका साधन ज्यादै सीमित थिए । गाउँमा बिजुली आएको थिएन, त्यसैले टेलिभिजन हुने कुरै भएन । रेडियोका कार्यक्रमहरू केटाकेटी लक्षित थिएनन् । सुत्नेबेला धेरैजसो आमा र कहिलेकाहीँ बाले सुनाउने लोककथा नै मनोरञ्जनको अडिलो आधार थियो । ‘स्वस्थानी’ पढ्ने दिनहरूमा एकजनाले सस्वर पढ्ने र घरका सबैले सुन्ने चलन थियो । खासै नजाने पनि हामी केटाकेटी पढ्न तम्सिन्थ्यौं र त्यो समय उत्सवजस्तै लाग्थ्यो ।
कुनै–कुनै वर्ष खेतबारीमा खासै काम नहुने हिउँदका पछिल्ला दिनहरूमा ‘रामायण’–‘महाभारत’ का किताब पढ्ने गरिन्थ्यो । ‘स्वस्थानी’ को किताब घरमा थियो । तर, ‘महाभारत’–‘रामायण’ का किताब माथ्लाघरे ठूलोबाकहाँबाट ल्याइन्थ्यो र तीन/चार घरका मान्छे जम्मा भएर सुनिथ्यो, त्यहाँका कथा ।
‘स्वस्थानी’ वर्षैपिच्छे पढिने भएर पनि हो कि ममा त्यसको प्रभाव बढी परेको थियो । त्यस किताबमा धेरै प्रसंग भए पनि सोलोडोलोमा मैले त्यतिबेला बुझेको विषय यत्ति थियो– ‘कथामा राक्षस हुन्थ्यो, उसले लामो समयसम्म कठोर तपस्या गरेपछि अजेय हुने वा त्यस्तै ठूलो शक्ति आर्जन गर्थ्यो र त्यसै शक्तिको आडमा देवताहरूलाई दुःख दिन्थ्यो ।’ देवताहरूले पनि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदिको तपस्या गरेर शक्ति आर्जन गर्थे वा आफ्नो वैभव फिर्ता लिन्थे ।
तपस्या र वरदान प्राप्तिका कथाले मेरो केटाकेटी मनमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । तपस्या गरेर अजेय हुने भावनाले मनमा स्थान बढाउँदै थियो । तर, तपस्या गर्न जाने कहाँ ? कसरी पुग्ने हिमालयसम्म ? यस्ता कुरा मनमा आउँदा घरमाथिको जंगलमा भएको ठूलो ढुंगाको अक्कर सम्झिएँ । बाख्रालाई घाँस काट्न हिँडेकी आमाको पछिपछि जंगल जाँदा देखेको थिएँ त्यो ढुंगा । मलाई लाग्यो, पानी पर्दा ओत लाग्न पनि मिल्ने त्यो अक्कर नै तपस्या गर्ने उपयुक्त स्थान हो ।
मनमा धेरै दिनसम्म कुरा खेलाएपछि एक शनिबार बिहानै कसैलाई केही नभनी म घरबाट हिडेँ । सायद आमा गोठतिर के–के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अरू कोही उठेकै थिएनन् । म सरासर त्यही अक्करमा पुगेँ र पलेँटी कसेर बसेँ । तपस्यामा के गर्छन् त थाहा थिएन, तर पनि एकोहोरो ‘ॐ नम शिवायः’ मनमनमा दोहोर्‍याउँदै आँखा चिम्लेर बसिरहेँ ।
त्यसबेला ९ वर्षकी थिएँ, चार कक्षा पढ्थेँ । घाम चर्किंदै गयो, बेस्सरी भोक लाग्न थाल्यो । तर, तपस्या कठोर हुन्छ, सामान्य भोक लाग्दैमा आत्तिनु हुन्न भन्ने मलाई बोध थियो । जाडोमा हिमालयमा गएर र गर्मीमा पञ्चाग्नी तापेर तपस्या गर्छन् भनेर जो सुनेकी थिएँ । त्यसै विश्वासमा भोकको औडाहा एकै छिनमा हराएर गयो ।
पारिलो डाँडाको त्यो पहरोको अक्करमा ज्यादै गर्मी थियो (सायद गर्मी महिना सुरु भइसकेको हुनुपर्छ) । हाई–हाई आइरहेको थियो । कतिखेर निदाएछु पत्तै भएन । सतह नमिलेको ढुंगामा पल्टेर निदाएकाले होला बिउँझँदा गाला र घुँडा दुखिरहेको थियो । भोक, तिर्खा दुवै कडा थियो । यी सबका बाबजुद तपस्याप्रतिको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी आएको थिएन ।
दिन ढल्दै गयो । अन्ततः साँझ पर्‍यो । अलिअलि हावा चलेको थियो । सुकेको सालका पातहरूले अनौठो आवाज निकाल्थे । भोक र तिर्खाको औडाहामा अब डर पनि थपियो । मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ । र, जुरुक्क उठेर खुरुरु दौडिएँ घरतिर ।
म पुग्दा घर सामान्य थिएन । मलाई देख्नेबित्तिकै आमा रुन थाल्नुभयो । दाइ–दिदीले रिसाएर हेरेका थिए । थाहा भयो, म बिहानै घरबाट हराएपछि गाउँमा व्यापक हल्ली–खल्ली र सोधखोज सुरु भएछ । मेरा साथीका घरहरू, नजिकैको बजार र अन्य सम्भावित ठाउँमा पनि नभेटेपछि सबैको मनमा एउटै डरले स्थान बनाएको रहेछ । गाउँमा कतैबाट आएको एउटा हल्ला थियो– गाउँनजिकै कतै केटाकेटीको बलि दिन्छन् ! ‘लाने मान्छे आउँछ’ भन्थे । गाउँमा नौलो मान्छे देख्नेबित्तिकै केटाकेटीहरूको भागाभाग हुन्थ्यो । त्यसदिन म हराएपछि ठूला मान्छेको मनमा चिसो पसेछ– हल्ला कतै साँच्चै त भएन ? अझ त्योबेला बुवा कामको सिलसिलामा बाहिर कतै जानुभएको थियो । त्यसैले म घर पुगेपछि पनि सायद आमाले आफूलाई थाम्न सक्नुभएन । उमेर बढ्दै गएपछि थाहा पाएँ, त्यो हल्ला उडन्ते थियो ।
ठीक त्यति नै बेला ठूलीआमाको छोरा दिनेश दाइ घर आइपुग्नुभयो । घरमा पाहुना आएपछि सबैले केही नभएजस्तो गर्न थाले । र, म थप गाली खानबाट बचेँ ।
सामान्य कुराकानीपछि दाइले मलाई सोध्नुभयो, ‘दिउसो कता गएकी थिइस्, कान्छी ? बाख्रा चराउन ?’
मैले गर्वका साथ भनेँ, ‘तपस्या गर्न !’
म सबै कुरा भन्न हौसिँदै थिएँ । दाइले मेरो कुरामा खासै चासो नदिईकन भन्नुभयो, ‘तपस्या त सबैले गर्नैपर्छ कान्छी ! तैंले र दाइले पढ्न लेख्नमा तपस्या गर्ने र कक्षामा पहिला हुने ! आमाले खाना बनाउन र घाँस काट्न तपस्या गर्ने ! दिदीले आमालाई सघाएर तपस्या गर्ने ! बुबाले जागिरमा तपस्या गर्ने !’
त्यसपछि तपस्याको कुरा सकियो । दाइ आमासँग अरू गफ गर्न थाल्नुभयो ।
म भने झस्याङ्ग भएँ । मैले बुझेको तपस्या र दाइले भनेको तपस्याबीच निकै फरक थियो । म दाइले भन्नुभएको तपस्या–तर्कबाट प्रभावित भएँ । तपस्या कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने मेरो द्विविधा अन्त्य भएझैं लाग्यो । मैले दाइको कुरा बुझेँ ।
भोलिपल्ट आमाले मलाई स्कुल पठाउनुभएन । र, हिजोबारे सोध्नुभयो । मैले सविस्तार बताइदिएँ । ‘छोरीमान्छेले कुनै तपस्या गर्दैनन् कान्छी ! तपस्या नै गरे पनि आफ्नो पति–सन्तानका लागि गर्ने हो । पार्वतीले पनि महादेव पति पाउन पूजा गरेकी हुन्, तपस्या होइन,’ आमाले दिक्क मानेर भन्नुभयो, ‘त्यो तपस्या पनि देउताको पालाको कुरो, सत्यजुगको । यो कलिमा केको तपस्या ? त्यै पनि आइमाई मान्छेले !’
आमाले कुरा टुंग्याउनुभयो, ‘अब एक/दुई वर्षमा दिदीको बिहे गर्दिने हो, त्यसको पाँच/छ वर्षमा तेरो । त्यतिखेरसम्म राम्रोसँग पढ् ।’
आमाको कुरा सुनेँ मात्रै, केही बोलिनँ । मेरो मनमा भने दिनेश दाइका कुरा खेलिरहेको थियो । आमाको कुरा झल्याँस्स सम्झेँ, ‘छोरीमान्छेले तपस्या गर्दैनन् कान्छी !’
किन गर्दैनन् छोरीमान्छेले तपस्या ? मैले मेरा कक्षाका केटाहरू सम्झेँ । दीपक, विक्रम, सुरेन्द्र, माधव– म कोभन्दा कम छु ? किन नगर्ने केटी मान्छेले तपस्या ? त्यसमाथि हाम्रो ‘क्लास फस्ट’ पनि केटी नै थिई– इन्दु । आमाको कुरा चित्त बुझेन । दिनेश दाइको कुरा नै ठीक लाग्यो ।
केही वर्षपछि ८ कक्षा पढ्दाको कुनै दिन कक्षाकै साथीको बिहे हल्लाको विषय बन्यो । हामीसँगै पढ्ने ज्योतिले भागेर बिहे गरिछ, नेपाल प्रहरीको हवल्दारसँग । त्यही दिन हो, अधिकारी सरले हामीसँग हाम्रो भविष्य र लक्ष्यबारे सोध्नुभएको थियो । केटाहरूले डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, ब्रिटिस आर्मी यस्तै–यस्तै भन्दै थिए । सर केटीहरूतर्फ फर्कनुभयो । राधिकाले डाक्टर बन्ने लक्ष्य सुनाई ।
‘बन्छेस् डाक्टर ! तँलाई झ्याइँकुटी पार्न कुनै पुलिस स्कुल वरिपरि घुमिराको होला । होइन भने पनि एसएलसी दिएको वर्षै बिहे गर्दिन तेरै बा–आमाले कोही केटा ठिक्क पार्लान् । अनि कसरी हुन्छेस् डाक्टर ?’ अधिकारी सरले कुरा टुंग्याए । राधिकाको अनुहार कालो–नीलो भएको थियो । अरू केटीहरूले पनि मुन्टो निहुर्‍याएका थिए, उनीहरूको बोली बन्द भएको थियो । केटाहरूको हाँसोले भने कक्षा थर्किरहेको थियो ।
अधिकारी सरसँग कक्षामा भएको छलफल मेरो मनमा गढेर बस्यो । राधिका र म दुवै जना कक्षामा औसत विद्यार्थी थियौँ, गाउँ पनि एउटै । भविष्यमा गणित–शिक्षक बन्ने लक्ष्य थियो मेरो । के सरले भनेजस्तै कुनै प्रहरी स्कुल वरिपरि घुमिरहेको छ मलाई भगाउन ? कि एसएलसी दिएको वर्षै बिहे गरिदिन आमा–बाले कुनै केटा खोजिरहनुभएको छ ?
छ/सात कक्षाबाट मैले पढाइमा अलि ध्यान दिन थालेको थिएँ । र, पढाइ पनि सुध्रिएको थियो । तर, सरको कुराले पढाइमा तपस्या गर्ने मेरो ध्यान खल्बलिएको थियो । हुन पनि गाउँमा धेरैजसो केटीको बिहे एसएलसी परीक्षाकै सेरोफेरोमा हुनेगर्थ्यो । तर, मलाई त्यति छिट्टै बिहे गर्नुथिएन । मलाई हाइस्कुलमा गणित पढाउने शिक्षक हुनु नै थियो । त्यसै दिन मैले सुरज सरसँग सोधेँ, ‘माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक बन्न कति पढ्नुपर्छ ?’ सरले भन्नुभयो, ‘बीए पास गर्नुपर्छ !’ मैले प्रण गरेँ, ‘जे नै भए पनि बीए पास नगरेसम्म बिहे गर्दिनँ ।’
प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७८ १०:४५
कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वमा दाबी गर युवा !
सधैं छहारी खोज्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिविशेषमा निहित क्षमतामा पनि खिया लाग्छ ।
भाद्र १८, २०७८ सम्झना वाग्ले भट्टराई
निराशानेपाली राजनीतिको विशृंखल उतारचढाव कहिले र कसरी टुंगिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्न । संघीय सरकार परिवर्तनको एउटा उच्चाटलाग्दो अवस्था अहिलेलाई सकिए पनि प्रदेशहरूमा यी जालसाजी जारी छन् ।
उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि कठोर संघर्ष गरेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरू र तिनका समूहको राजनीतिक खिचातानी निकृष्ट तहमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनका फेहरिस्त सरकारी प्रतिवेदनहरूमै छताछुल्ल छन् । शासकीय दम्भ, आरोप–प्रत्यारोपमा प्रयुक्त भाषा र शैली, एकअर्काका समर्थक र विरोधीहरूले सामाजिक सञ्जालमा चलाएका अभियान आदिले राजनीतिक संस्कारको स्तर छर्लंग पारेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले राजनीति सुध्रिएको छैन, पार्टीहरू नियत र क्षुद्रतामा समान छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । नेता–कार्यकर्ताको आचरण र उनीहरूप्रतिको अविश्वासका कारण निर्णायक समयमा रिसोर्टमा राख्ने अभ्यास प्रायः सबै पार्टीमा देखिएको छ । नेताहरूको खुलेआम खरिद–बिक्री, अपहरण सामान्य हुन थालेको छ । सिद्धान्त, दर्शन, विचार, रणनीति र कार्यदिशा मिलेमा नेताहरू एउटै पार्टीमा रहने वा नमिलेमा फरक हुने भन्ने सार्वभौम नियम नेपालमा लागू हुँदैन । आदर्श र सिद्धान्तका चर्का कुरा गर्नेहरूले लाभ–हानि तौलिएर गुट वा पार्टी रोज्ने अभ्यास सामान्य भएको छ । नेपाली राजनीतिमा दर्शन, सिद्धान्त र निष्ठाको अन्त्य भई स्वार्थ मात्र बाँकी छ ।
यी सब विकृतिको अपजस शीर्ष नेताहरूलाई मात्र थोपरेर पुग्दैन । पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू विकृत अभ्यास गर्न अग्रजभन्दा पारंगत भैसकेका प्रमाणहरू प्रशस्त छन्, कार्यकर्ताहरू सायद सिक्दै छन् । राजनीतिक पक्षधरतामा विवेक बन्धक राख्नु अनिवार्यजस्तै भयो । नेता–कार्यकर्ताको देवत्वकरण–दानवीकरण र दानवीकरण–देवत्वकरणको दोहोरो अभ्यास स्वाभाविक देखिएको छ । र, यसको नक्कल पेसाकर्मी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, विद्यार्थीलगायत सामान्य जनमा पनि देखिन थालेको छ, जसको असर समाज र व्यक्तिव्यक्तिसम्म पुगेको छ । जुनै पनि क्षेत्रमा देखिएको अति राजनीतीकरण, राजनीतिको विद्रूपीकरण आदिले समाज र सम्पूर्ण देश आक्रान्त छ ।
नेपाली राजनीतिमा सम्भावनाका संकेतहरू पनि प्रशस्त छन् । उदाहरणका लागि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध महामारीबीच पनि जसरी आवाज उठ्यो, आन्दोलन भयो, त्यो उज्यालोको संकेत हो । राजनीतिक स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरू मात्र होइन, प्रेस र नागरिक समाजको अथक मिहिनेत–भूमिका र अदालतको कार्यसम्पादनले तत्कालका लागि यसमा अंकुश लगाएको छ । त्यस्तै, महामारी सृजित अप्ठ्यारो परिवेशमा पनि युवा अभियन्ताहरूको गतिविधि र प्रयासले उज्यालो भविष्यको आस जगाउँछ । यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।
यिनै संगत/असंगत समयको सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको टुंगो लागेको छ । यो महाधिवेशनले कस्ता नेताहरूलाई जिम्मेवारीमा ल्याउला त ? नेपाली कांग्रेस विविधतायुक्त पार्टी हो । बीपी कोइरालाजस्ता दूरदर्शी, गणेशमान सिंहजस्ता त्यागी, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता सादगीपूर्ण नेताहरूले जन्माएको/हुर्काएको पार्टीमा, प्रदीप गिरिजस्ता अध्ययनशील नेता छन् र छन्— नेपाली सत्ता राजनीतिको विकृतिको प्रवर्तक मानिनेहरू पनि । यी दुवै प्रवृत्तिका बीचमा पर्ने धेरै नेतामध्ये महाधिवेशनबाट कस्ता नेताहरू जिम्मेवारीमा आउलान् ? उनीहरू विसंगत राजनीतिको फोहोरी भेलमा समाहित होलान् वा फरक केही गर्लान् भन्ने अनुमान लगाउन अहिल्यै सकिन्न ।
यसपालि गगन थापाले महामन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई अघि सारेका छन् । कांग्रेसको यो पुस्ताले पार्टी सभापतिमै दाबी गर्नुपर्थ्यो । थापाबाहेक विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरे, धनराज गुरुङजस्ता सक्षम युवा पार्टीमा छन् । शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंहजस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा पनि सक्षम नेतृत्वको सम्भावना देखिन्छ ।
दोस्रो पुस्ता भनिने नेताहरूले आफूलाई राजनीतिमा अगाडि ल्याउन सकेका छैनन् । जसरी एमालेमा दोस्रो पुस्ता भनिने नेताहरू पहिलो पुस्ताका नेताहरूका लाचार छायाजस्ता मात्र देखिए, कांग्रेसको पनि स्थिति त्यही हो । त्यसैले कांग्रेस नेतृत्व चयन सन्दर्भमा क्रमागत पालो (हाइरार्की) को परम्परागत शैली छोडेर युवा पुस्ताले निर्णायक हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।
महाधिवेशन नेतृत्व छनोटको अवसर मात्र होइन, सैद्धान्तिक बहस, नीति, भावी कार्यदिशा निर्माणसहितको नेतृत्व छनोटको अवसर पनि हो । कांग्रेसमा संस्थागत रूपमा सैद्धान्तिक बहसले ठाउँ नपाएको वर्षौं भयो । सैद्धान्तिक बहसको शून्यताले पार्टी कस्तो बन्दो रहेछ भनी पार्टीभित्रकै नेता–कार्यकर्ताले बढी बुझेका होलान्, त्यसको मूल्य सारा देशले चुकाउनुपरेकै छ । यो वैचारिक शून्यता अन्त्यका लागि युवा नेतृत्व आँट र तयारीका साथ अगाडि आउनैपर्छ ।
अहिले निर्णायक ठाउँमा रहेका नेताहरू गुट राजनीतिभन्दा बाहिर आउन नसकेको जगजाहेरै छ । परिणामतः नेतृत्व पार्टी सञ्चालन र सरकारको प्रतिपक्षी भूमिका दुवैमा असफल प्रमाणित भैसकेका छन् । अहिले सरकारको नेतृत्वको अवसर राजनीतिक कुशलताले होइन, अघिल्लो सत्ताधारी पार्टी नेतृत्वको उपद्रोको परिणाम मात्र हात लागेको हो । यो अवसरको न्यूनतम सदुपयोग गर्ने संकेत पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
अविच्छिन्न नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा नेपाली राजनीतिको महारोग हो र कांग्रेसमा यो झनै पुरानो र जण्ड छ । पाँच पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उल्लेख गर्नलायक उपलब्धि शून्य तर विसंगत राजनीतिको सारथि बनेका शेरबहादुर देउवा यो अधिवेशनमा पाँचौं पटक चुनावी मैदानमा ओर्लिएका छन् । यो समग्र नेपाली राजनीति र कांग्रेसकै लागि विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । यसको अन्त्यका लागि युवा कांग्रेसले आँट गर्नैपर्छ र इमानदार शीर्ष नेतृत्वले गुट–उपगुटको सम्बन्ध बिर्सिएर युवालाई साथ दिनैपर्छ ।
त्यसो त, युवा सबै समस्याको समाधान होइनन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नेतृत्वको योग्यता उमेरको कसीमा नापिने होइन । उमेरको वृद्धिले राजनीतिक इच्छाशक्ति वा कार्यक्षमतामा वृद्धि वा कमी आउने होइन । व्यक्तिको उमेर वा पार्टी जीवनमा उसको समयको लगानीकै आधारमा नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । पटकपटकको अवसरमा सफल साबित हुन नसकेका नेताहरूभन्दा परीक्षणमा सम्भावना देखाएका वा परीक्षण हुनै बाँकी तर प्रचुर सम्भावना भएका युवा नेताहरूलाई मौका दिए मात्र नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको योगदान सार्थक होला ।
के युवाहरू निर्विकल्प हुन् त ? होइनन् । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको अपराधीकरणमा युवा नेताहरू अग्रमोर्चामा देखिएका छन् । गुटको विरासत पनि नयाँ पुस्तामा सर्दै गएको देखिन्छ । अध्ययनको अभाव, चर्चाको भोक, धैर्यको कमीजस्ता समस्या दलमा आबद्ध युवाहरूमा देखिन्छ । त्यस्ता युवाहरू राजनीतिको समस्यालाई मिहिन ढंगले बुझ्ने र समाधानको खोजी गर्नेभन्दा पनि ‘आई लभ यु ओली बा’ वा ‘यसकारण मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ...’ जस्ता अभियानमा आकर्षित छन् ।
देश असामान्य अवस्थामा छ । महामारीले अर्थतन्त्र थिलथिलिएको छ । अति राजनीतीकरणले राज्यका संरचनाहरू अस्तव्यस्त छन् । गरिबी, बेरोजगारीजस्ता समस्याको समाधान तत्काल खोज्नुपर्नेछ । राजनीति र सत्ता, नेताहरूका वरिपरि झुम्मिने झुन्डको स्वार्थ पूरा गर्ने होइन, आमजनताको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने व्यवहारबाट देखाउनु छ । आफूलाई स्थापित गर्न तयार नेताले देशका यस्ता समसामयिक विषयलाई बहसमा ल्याउनुपर्छ । नेतृत्व पाए, ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्छु भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । गुट वा छहारीको राजनीतिक घेराबाहिर निस्कनुपर्छ । जब विचार गौण र व्यक्ति प्रधान हुन्छ, तब विविध किसिमका स्वार्थप्रेरित समूह र गुटहरू बन्न थाल्छन् । सधैं छहारी खोज्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिविशेषमा निहित क्षमतामा पनि खिया लाग्छ । त्यसैले महाधिवेशनको तयारीमा नेतृत्वको परिक्रमा र कार्यकर्ता परिचालनभन्दा पनि सैद्धान्तिक बहसमा केन्द्रित गरी अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नत्र कर्मकाण्डी महाधिवेशनले एउटा अकर्मण्य नेतृत्वलाई स्थापित गर्छ, जसको मूल्य पार्टीले मात्र होइन सारा मुलुकले चुकाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७८ ०७:३८